UGoogle ukwasebenza kwifowuni yokusonga
Ukuqala kweGoogle I / O 2019 isishiye nezinto ezininzi ezintsha. Kwelinye icala, iifowuni zokuqala eziphakathi kwebanga zaziswa ngaphakathi kuluhlu lwePixel. I-Pixel 3a kunye ne-3a XL ityhilwe kwaye yasungulwa sele isemthethweni, njengoko besikuxelele izolo. Ukongeza, zonke iindaba ezikhutshwe kwi-beta yesithathu ye-Android Q zazisiwe. ukuba ungafunda kule khonkco. Kodwa inkampani iyaqhubeka nokusishiya neendaba.
Kule beta ye-Android Q sibonile ukuba kwenziwa njani inkxaso yokusonga izikrini, ezifumana udumo kwimarike. Iimpawu ezininzi ngoku zisebenza kwezi ntlobo zeefowuni. UGoogle ukwenye yazo, nangona kwimeko yakho kuya kufuneka silinde ixesha elide ide ifike.
UGoogle ukhangela umhlaba wokugoqa iifowuni, njengoko igosa lenkampani lathi kudliwanondlebe. Inkampani okwangoku isasaza iiprototypes ezahlukeneyo. Nangona okwangoku ukuveliswa kwayo kungekaqali, kwaye akaziwa ukuba inkampani iya kulandela ntoni ngezi zixhobo.
Ke ngoku imeko yale fowuni inokwenzeka ayaziwa yenkampani. Into ebonakala icacile kukuba ayisiyiyo indibano eza kwenzeka kulo nyaka. Ifemi ijonge ukuthatha olu phuculo kumanqwanqwa, ngenxa yoko isenokungabikho kude kube kunyaka olandelayo xa isungula.
Ekuphela kwento esele ithethiwe kuGoogle kukuba basebenza ngeendlela ezahlukeneyo, zona bonisa iindlela ezahlukeneyo zokuvula nokuvala. Le yinto enomdla, kuba kubonakala ngathi uphawu ngalunye lwe-Android lujonge ukwenza inkqubo yalo kwiifowuni ezisongwayo. Into ebenza babenomdla kubathengi.
Ke siza kubona ukuba inkampani isilungiselele ntoni malunga noku. Ithembisa ukuba ngumnxeba onomdla, kodwa UGoogle ubonakala engangxamanga. Ke ngoko, kuya kufuneka sizixhase ngomonde de ifowuni yokusonga yokuqala yohlobo lwaseMelika lube yinyani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » UGoogle ukwasebenza kwifowuni yokusonga
Isamsung isungula uhlobo lweshishini lweGPS S10 kunye neS10e
Ngoku ungathatha iifoto uye enyangeni ngeXiaomi Mi 9 SE enkosi kuhlaziyo olutsha